ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း (Making Decision) - Myanmar Network
ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း (Making Decision)
Posted by zar ni (My Way!) on February 5, 2013 at 15:22 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
စောင့်ရခြင်းသည်စိတ်ဒုက္ခ။ မေ့ပစ်ဖို့ကြိုးစားပြန်လျှင်လည်းနာကျင်ရ။ အဆိုးဆုံးကား ဘာကိုဆုံးဖြတ်ရမလဲမသိတာက အကြီးမားဆုံး ဒုက္ခဆင်းရဲတည်း။
ကျွန်တော်တို့သည် အခါများစွာ ဆုံးဖြတ်ရခက်သော လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြဖူးသည်။ "Where there is no decision, there is no life" ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိလျှင်ဘ၀ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ တစ်ခုကိုရွေးလျှင် တစ်ခုကိုစွန့်လွှတ်ရမည်ကသဘာဝ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်နာကျင်မှု အသက်သာဆုံးလမ်းကိုရွေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပင်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ် ချက်ချသည်ဖြစ်စေ၊ သူများကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းသည်ဖြစ်စေပြောဆိုရာတွင်သုံးလေ့ရှိသည့် expression များကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
Asking someone what they’ like to do သူတပါးဘာလုပ်ချင်သလဲမေးခြင်း
Do you feel like going to the cinema? ရုပ်ရှင်ရုံသွားချင်စိတ်လေးများမရှိဘူးလား။
Would you like to join us for dinner? ဒီည တို့နဲ့ညစာလာစားပါလား။
How about going out tonight? ဒီညအပြင်ထွက်လည်ကြရအောင်။
Shall we go out tonight? ဒီညအပြင်ထွက်လည်ကြမလား။
Do you fancy going out for dinner? (UK— informal) ညစာအပြင်ထွက်စားချင်လား။
Are you up forabit of golf? (informal) ဂေါဖ့်ကစားဖို့အဆင်ပြေမလား။
are you up for something ဟာ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်၊ စိတ်ရောခန္ဓာပါစွမ်းဆောင်နိုင်သလားလို့မေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။
Asking someone to choose (ရွေးချယ်ဖို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမေးခြင်း)
Which one do you want? ဘယ်တစ်ခုလိုချင်သလဲ။
What do you want to do? ဘာလုပ်ချင်သလဲ။
Where do you want to go? ဘယ်သွားချင်သလဲ။
What time do you want to leave? ဘယ်အချိန်သွားချင်သလဲ။
Which one do you prefer? ဘယ်တစ်ခုပိုကြိုက်သလဲ။
Expressing doubt (သံသယကိုဖော်ပြခြင်း)
ကိုယ်ကအရွေးရခက်နေတာ၊ ဘယ်ဟာကပိုကောင်း၊ ပိုသင့်တော်သလဲဆိုတာမျိုးကို မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါ အောက်ပါပုံစံလေးတွေအတိုင်းပြောနိုင်ပါတယ်။
I'm not sure. သိပ်တော့မသေချာဘူး။
I can't decide. မဆုံးဖြတ်တတ်ဘူး။
I can't quite make up my mind. သိပ်တော့စိတ်ပိုင်းဖြတ်လို့မရသေးဘူး။
It'sadifﬁcult choice. ရွေးဖို့ခက်တယ်။
I'm in two minds about it. စိတ်နှစ်ခွဖြစ်နေတယ်။
It's an impossible choice. အရွေးရတော်တော်ခက်တာပဲ။
Asking someone else to decide (သူများကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ပြောခြင်း)
You choose. မင်းပဲရွေး။
It's your choice. ဒါမင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ။
The choice is yours. ဒါမင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ။
It's your call. မင်းဆုံးဖြတ်ရမှာ။
It's your decision. မင်းဆုံးဖြတ်ရမှာ။
You decide. မင်းဆုံးဖြတ်ရမှာ။
It's up to you. မင်းအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။
Make up your own mind. ကိုယ့်ဘာသာစိတ်ပိုင်းဖြတ်။
I'm happy for you to choose. (formal) မင်းရွေးခွင့်အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။
Do as you please. (no interest) မင်းစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးတာပဲ။ (စိတ်မ၀င်စား)
Do what you want. (no interest) ကြိုက်သလိုသာလုပ်ပါလေ။ (စိတ်မ၀င်စား)
Expressing indifference (ထူးမခြားနားဟန်ပြခြင်း)
တစ်ခါတစ်လေမှာ တစ်ဖက်ကဘာပဲရွေးလိုက်ရွေးလိုက်၊ ကိုယ့်အတွက်ကိစ္စမရှိဘူး။ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာပြနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်းပြောနိုင်ပါတယ်။
I really don't mind. (you don't feel strongly about it) စိတ်ထဲဘယ်လိုမှမနေဘူး။ (ဘာဖြစ်ဖြစ်)
It doesn't make any difference to me. ငါ့အတွက်တော့ဘာမှမထူးခြားပါဘူး။
I'm not really bothered. ငါတော့စိတ်အရှုပ်မခံဘူး။
It's ﬁne by me. ငါဘက်ကရပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။
It's no skin off my nose. ငါခံရတာမှမဟုတ်တာ။ ဂရုမစိုက်ဘူး။ ငါကအနေသာကြီးပါ။
I don't care. (very negative — you have no interest in it) ဂရုမစိုက်ဘူး။ (အနှုတ်သဘောဆောင်)
I couldn't care less. (very negative —you have absolutely no interest in it) တစ်စက်မှဂရုမစိုက်ဘူး။ (အနှုတ်သဘောဆောင်)
OK, suit yourself! (this can soundabit defensive) စိတ်ချမ်းသာသလိုလုပ်ပါ။
Changing Your mind (စိတ်ပြောင်းခြင်း)
တစ်ခုခုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးမှ မကြာခင်စိတ်ပြောင်းသွားတာမျိုး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြန်ပြင်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ သုံးနိုင်တာတွေပါ။
Actually, I've changed my mind. တကယ်တော့ စိတ်ပြောင်းသွားပြီ။
On second thoughts, I think I'd rather. . . သေသေချာချာတွေးကြည့်တော့ . . .လုပ်တာကောင်းမယ်နော်။
To be honest, I think I'd prefer to . . . ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် . . . ကိုပိုကြိုက်တယ်ထင်တယ်။
Actually, come to think of it, I haven't got enough time to . . . တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်မှ . . . လုပ်ဖို့အချိန်မရှိပါဘူး။
I've hadachange of heart. I think I’d rather. . . စိတ်ပြောင်းသွားပြီ။ . . . ကိုပဲလုပ်တော့မယ်။
Hang onaminute. I think it'd be better to . . . ခဏလေး။ . . . . လုပ်တာပဲကောင်းမယ်ထင်တယ်။
I've hadabit ofarethink and I think . . . နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ . . .
On reﬂection, I think it'd be better to . . . နှိုင်းဆဆင်ခြင်လိုက်ရင် . . . လုပ်တာပိုကောင်းမလားလို့။
ကဲဒါတွေကတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြောဆိုပုံများပါပဲ။ သူတို့ကိုဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတာကို အောက်ပါ အချီအချစကားပြောပုံလေးနဲ့လေ့လာကြည့်ရင်ပိုနားလည်သွားမှာပါ။
Damien: Shall we go out?
Emma: Great idea! What would you like to do?
Damien: Well, we could go for pizza. Or, go to the pub. Or, do you fancy seeing that new Leonardo DiCaprio movie? We could even go bowling. What would you like to clo? It's your call.
Emma: Erm... I really don't mind. You decide.
Damien: OK then... the pub. Let's go to the pub.
Emma: Erm... come to think of it, I went to the pub last night.
Damien: Oh, OK. How aboutapizza then? I know this great new pizza place.
Emma: I love pizza! Erm... hang onaminute, I had pizza for lunch.
Damien: Erm, OK. Well, there are only two options left. Bowling or the movies. What do you prefer?
Emma: Erm... I'm not sure. It's your call. It's up to you.
Damien:OK. Let’s go bowling,then.
Emma: Oh, erm... to be honest, I don't really like bowling.
Damien: [getting fed up] I thought you didn't mind what we did. Well, the only option left is the cinema. Are you up foramovie?
Emma: Sounds great! Let's go.
Damien: [relieved] Really? Fantastic!
Emma: Waitasec!
Damien: [wary] Yes?
Emma: What ﬁlm was it again?
Damien: The new one with Leonardo Di Caprio.
Emma: What was I thinking? I've already seen it! What were the other three options again?
Damien: Erm... on second thoughts, I think I'll go out alone.
Damien: Because you're driving me crazy!
Emma: [offended] Suit yourself. It's no skin off my nose.
Permalink Reply by Htun Htun on February 5, 2013 at 21:20
Permalink Reply by u san win on February 6, 2013 at 9:55
အင်္ဂလိပ်စာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူသားအားလုံး တတ်မြောက်ရန် လိုအပ်နေ ပြီလို့မြင်မိပါတယ်။တခြားဘာသာစကားတွေ တတ်ရန်လိုအပ်ပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုအရင်ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ရင်ဘဲ ဒီဘ၀မှာလူ ဖြစ်ရကြိုးနပ်ပြီလို့ပြောလိုပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Permalink Reply by tunzaw007a on February 6, 2013 at 11:11
This is an excellent lecture for all of us,I really think.10Q for it! Be healthy!
Permalink Reply by KHIN MYAT THU on February 6, 2013 at 11:17
Permalink Reply by yemyanmar on February 6, 2013 at 11:44
Permalink Reply by aung lwin on February 6, 2013 at 13:50
Permalink Reply by shwelat on February 6, 2013 at 14:22
Permalink Reply by Moe Moe Thu on February 6, 2013 at 14:26
Permalink Reply by Mar Lar Khine on February 6, 2013 at 15:01
Thanks...Sayar! It'sauseful lesson..
Permalink Reply by Ratan Biswas on February 6, 2013 at 19:45
Permalink Reply by Thida Pyae on February 6, 2013 at 21:33
thanks it is really useful for me.
Permalink Reply by padout,layy on February 7, 2013 at 3:04
Thank for sharing.. sayar zarne